Waa Beentiis Aniga Ma Dhihin Qolka Labiska Real Madrid
Ruud van Nistelrooy ayaa beenisay hadalkii Fabio Capello ee ahaa in qolka labiska Real Madrid ay ka soo ureysay khamri madaama uu Ronaldo aad u cabi jiray khamriga.
Ninka reer Holland ayaa joogay Santiago Bernabeu isla waqtigii uu kooxda joogay Ronaldo Nazario kaasoo uu Capello qirtay inuu dhibaato badan ku qabay markii uu kooxda tababare ka ahaa.
“Xiddigii ugu tayada weynaa ee aan heystay abid waxa uu ahaa Ronaldo” ayuu Capello u sheegay Sky Sports.
“Laakiin waxa uu ahaa ciyaaryahanka dhibaatada ugu badan iigu abuuray qolka labiska.
“Waxa uu caado ka dhigtay inuu xaflado qabsado islamarkaana uu sameeyo wax walba.
“Van Nistelrooy ayaa mar igu yiri: ‘Tababare, qolka labiska waxaa ka soo ureyso khamri”
Si kastaba, Van Nisteltooy ayaa beeniyay hadalka Capello isagoo qoraalkaan soo dhigay bogiisa Twitter.
“Anigoo ka jawaab celinaya hadalkii uu sheegay Fabio Capello ee ahaa inaan mar iri qolka labiska Real Madrid waxaa ka soo ureyso khamri, waxaan doonayaa inaan gabi ahaanba beeniyo hadalkaas” ayuu qoray Nistelrooy.
“Qof walba oo qolkaas labiska joogay waxa uu soo bandhigay xiradlenimo meeshii ugu sareysay maalintii koowaadba.
“Mid kasta oo inaga mid ah waxa uu ka shaqeeyay inuu difaaco calaamada kooxda si xiradlenimo ah.”